I-O2 inyusa ireyithi yabathengi bayo nge-5 GB ngaphandle kweendleko ezongeziweyo | Iindaba zeGajethi
I-O2 inyusa izinga labathengi bayo nge-5 GB ngaphandle kweendleko ezongeziweyo
UMiguel Hernandez | | Abaqhubi, Umnxeba
I-O2 yinkampani "yakutshanje" eSpain, ngaphandle kokuba iyinxalenye yenkampani yeenkampani zonxibelelwano ezomeleleyo eSpain, sithetha ngeTelefonica. Injongo yomnxeba "wexabiso eliphantsi" ayisiyonto enye ngaphandle kokunikezela ngamaxabiso akhuphisanayo esebenzisa iziseko zophuhliso kunye nokukhuphisana nokunikezelwa kweenkampani ezinjengePepephone okanye iMásMóvil. Ngoku i-O2 ithathe isigqibo sokunyusa isantya sedatha yabasebenzisi bayo nge-5 GB ngaphandle kweendleko, le ntengiso isetyenziswa ngokuzenzekelayo kubo bonke abasebenzisi ukusukela namhlanje, Ukuba ungumsebenzisi we-O2, wamkelekile.
Ukukwazisa ngale miqathango mitsha, unokufumana iSMS kwifowuni yakho eqhagamshelwe kwinkampani eneendaba. Kule SMS ithunyelwe ukusuka kwinombolo 1551 lo mbhalo ulandelayo:
Ulwazi lwe-O2: Molweni. Ukusukela namhlanje wonwabela i-5 GB ngaphezulu kumgca weselfowuni o2. Ireyithi yakho isuka kwi-20 GB iye kwi-25 GB ngaphandle kokuphakamisa ixabiso. Ungayijonga kwi-Mi O2 app.
Eli nqanaba litsha lisebenza kubo bobabini abasebenzisi bangoku kunye nabasebenzisi abatsha bexesha elizayo, kwaye kunjalo I-O2 itshintshe isicwangciso sayo sokubhida, apho kude kube ngoku kuphela kungumgca odityanisiweyo + wefayibha ethiwe thaca, ukuqhubeka nokubonelela ngoku kulandelayo:
Ifayibha kunye neselfowuni: I-300/300 Mb yefayibha + 25 GB yeselfowuni eneefowuni ezingenamda 50 euro.
Iselfowuni: I-25 GB yeselfowuni eneefowuni ezingenamda 25 euro.
Ifayibha: Ngama-300/300 Mb wefayibha + kwiminxeba yelizwe ngokuthi 38 euro.
Ukuza kuthi ga ngoku inkampani igcina isithembiso sokunganyusi amaxabiso ayo kubasebenzisi abasele beqeshiwe kwaye iyaqhubeka nokubonelela ngezinye zeepakeji ezinokhuphiswano kwimarike, ithathela ingqalelo ukuba azinasigxina okanye iindleko zokufaka kwimeko ye-fiber optics, njengoko isenza kwezinye iinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » I-O2 inyusa izinga labathengi bayo nge-5 GB ngaphandle kweendleko ezongeziweyo
Ngaba unayo i-InfoSearch malware kwi-Mac yakho? Ke ndiye ndakwazi ukuyiphelisa
I-Samsung Galaxy Buds ngasentla kumgangatho weaudiyo ye-AirPods Pro